The Ab Presents Nepal » श्रीमती राष्ट्रपति हुँदा पनि मदन भण्डारीले पाएनन् न्याय!
श्रीमती राष्ट्रपति हुँदा पनि मदन भण्डारीले पाएनन् न्याय!
काठमाडाैं-: आज जेठ ३ गते, मदन-आश्रित स्मृति दिवस । विसं २०५० जेठ ३ गते नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको चितवनस्थित दासढुङ्गामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परी निधन भएको आज २६ वर्ष पूरा भयो ।
‘यो २६ वर्षमा नारायणीमा धेरै पानी बग्यो, तर दासढुङ्गा जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।’ यो बीचमा भण्डारीको विचार र सिद्धान्त बोकेको पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले पटक-पटक सरकारमा पुग्यो । तर अहिलेसम्म दुर्घटनाको रहस्य पत्ता लगाउन चासाे नै दिएकाे छैन् ।’
जेठ ३ गते सबैले शालिकमा माला लगाउने, मुठ्ठी कसेर अभिवादन गर्ने र उहाँ महान हुनुन्थ्यो’ भन्ने भन्दा कसैले केहि गरेको छैन । अहिले उनै भण्डारी महासचिव रहेको पार्टीले दुई तिहाइ मतसहितको शक्तिशाली सरकार चलाई राखेको छ । तर, यतिको शक्तिशाली सरकारले समेत यो घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न समेत नखोज्नुलाई भने आम नागरिकले रहस्यमय रुपमा लिएका छन् ।
‘भएका नभएका कानुन ल्याएर नागरिकका अधिकार खुम्च्याउन खोज्ने सरकारले मदन-आश्रीतका हत्यारा पत्ता लगाउन किन सक्दैन ? किन चासो दिएको छैन । जसको मार्गदर्शनमा पार्टी चलेको छ उसैको हत्यारा पत्ता लगाउन किन आवाश्यक ठानिएको छैन् ? यो प्रश्नले हामीलाई घोचिरहने छ ।नेकपाका एक कार्यकर्ताले भने ।
आजकै दिन पारेर पूर्व एमाले र माओवादीले कुम मिलाए । पार्टी एक गराए । तर जसको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम र अनेकन भाषण गरिन्छ उसैको हत्यारा पत्ता लगाउन किन चासो दिइएको छैन ? कार्यकर्ताहरुको प्रश्न छ ।